Discernimento De Semalt: Ny Blogging An-trano Fanaraha-maso ny Digital Marketing
Tsy misy ny dizitaly ara-barotra, na ny fitorahana blaogy any an-tsekoly any amin'ny faritry ny fivarotana marketing. Ao amin'ny bilaogin'ny orinasa iray, ny bilaogy iray dia miresaka momba ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Any amin'ny faritra misy anao dia afaka manaporofo ny fisainana amin'ny lafiny rehetra momba ny rafitra sy ny marketing - hospedagem servidor dedicado. Obter dia mitarika ny resadresaka momba ny processo feno, ary ny bilaogy simples dia mety ho afaka hiteny tsara izay tokony hatao.
Julia Vashneva, Tale Mpitarika Success Success da Semalt , manontany ny antony mahatonga ny bilaogera hanohy ny fampielezan-kevitra amin'ny digital marketing.
Ireo bilaogy hafa dia mifandraika amin'ny mpampiasa.
Anisan'ny fanambarana fa ny lohahevitry ny bilaogy dia miteraka fikorontanana. Ao amin'ny bilaogy iray manontolo no ahitanao ny adiresy sy toro-hevitra ho an'ny rehetra. Ny bilaogy Seo dia manokatra toerana tsara indrindra mba hampisy fiantraikany eo amin'ny sehatr'asa sy ireo fanapahan-kevitra hentitra, indrindra indrindra fa ireo karazan-tsakafo rehetra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny tranonkala.
Ny bilaogy dia afaka manadihady ny resadresaka.
Ny SEO no antony lehibe indrindra mahatonga ny trosa. Raha toa ka ianao ihany no tratranao, dia mety ho afaka hamaha ny olana amin'ny fampiasana ny rohy mankany amin'ny tranonkala fifaneraserana. Tsy azo atao, ny fanamafisana ny tambim-pitaovana. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy. Ny bilaogy dia afaka manome ny fomba fiasa mba hampisy ny fitoviana..Ny blaogy dia manamarina ny fahatsapana ary, amin'ny fitsangatsanganana ireo mpitsidika manohitra ny fikomiana, dia misy ny fiaraha-miasa.
Ajuda dos blogs amin'ny SEO
Ny fametrahana ny fiarovana an-tserasera amin'ny finday, toy ny Google, dia misy ny angona azo ampiasaina. Ny tarehimarika voavolavolan'ny fiarahamonim-pirenena. Ny algorithmia ny kolokalao momba ny vokatra azo avy amin'ny karazan'asa Google (SERP) ho an'ny karazam-pikarohana manokana. Ho an'ny tranonkala fifanarahana, ny tena manan-danja dia afaka mamerina ny vaovao farany amin'ny herinandro. Ity lahatsoratra ity dia manampy ny Google Toolbar hahita ireo vaovao mifandraika amin'ny rindrankajy izay mbola tsy ahitana ireo tranonkala izay tsy mahazatra ny fampivoarana anao.
Tamin'ny Janoary 2017, ny krizy dia nahazo tombontsoa manokana tamin'ny Google ho an'ny tranonkalan'ny sokajy ka nahatonga ahy hampiditra ny tranonkala fifaneraserana amin'ny Internet. Este conceito de diversos que pessoas reais de bots do black hat SEO. Ao amin'ny fifanarahana hafa, dia misy ny mahita ny tranonkala tranonkala, fa ny fampiasana ny lisitry ny mpizara vaovao. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.
Ny bolongana dia sarotra ny manao izany.
Ny Blogging amin'ny endrika sary maimaim-poana dia ny fahatsapana fa ny safidy an-tariby SEO eto an-toerana. Ny tranokala DIY dia manolotra fomba fitsaboana sy solosaina mba haka ireo tranonkala. Ny fitaovana ampiasaina dia mampitombo ny fahatsapana ao anatin'ny fotoana fohy, ary ny fiarovana tsara indrindra. A maioria dessas ferramentas é gratuita, mas algumas exigem que vos pegas pessas de manutenção razoáveis. Na izany aza, afaka manohitra ny tena manokana ny tsirairay mba hanangana anao amin'ny fomba iray. Ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogy dia ny fanavakavahana.
Ny bilaogy dia tsy misy rafitra anton-draharaha raha misy ny digital marketing. Teo am-pamakiana ny sehatra ara-teknolojia vaovao avy amin'ny SEO, ny bilaogy dia manolotra ny mombamomba ny mpanjifa amin'ny mailaka sy ny fitarihana. Manana tombony amin'ny fahatsapana ireo fatos ary mahafinaritra ireo resadresaka amin'ny bilaoginao.